Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada WHO oo Kadayrisay Xaalada Caafimaadka Itoobiya.
Hay’ada WHO oo Kadayrisay Xaalada Caafimaadka Itoobiya.
Warbixin ay soosaartay Hay’ada caafimaadka aduunka WHO ayaa lagu sheegay in wadamada Africa ay dawo la’aan ugu dhintaan 120 kun oo qof sanadkiiba kuwaas oo sida warbixinta lagu sheegay isticmaalay dawooyin been abuur ah.
Sida warbixinta hay’ada WHO ay soosaartay lagu sheegay wadanka Itoobiya ayaa kaalin hore kaga jira wadamada ay dadkoodu udhintaan dawo la’aanta iyadoo hay’adu ay xustay in Itoobiya laga Isticmaalo dawooyin been abuur ah oo wadanka gudihiisa lagu sameeyo ama si aan sharci ahayn kusoo gala.
Sidoo kale warbixinta ayaa xustay in sanadihii lasoo dhaafay ay wadanka Itoobiya ku dhinteen kumanaan shacab ah oo danyar ubadan kuwaas oo sida lasheegay isticmaalay dawooyin been abuur ah oo lagu qoray magacyo xayaysiin ah, waxayna warbixintu xustay in wadanka Itoobiya uu kow kayahay wadamada aan ilaalinin tayada dawada.
Dawooyinka been abuurka ah ayaa lasheegayaa in ay wadanka Itoobiya soo galeen kadib markii xukuumadu ay dawi tayo leh keeni wayday lacag la’aan owgeed, waxaana laxasuusan yahayin wadanka laga waayay lacagihii dadkaa ee dibada wax lagaga soo dajin jiray.
Boobka hantida iyo musuq maasuqa baahsan ayaa keenay in gabi ahaanba ay musalafaan bangiyadii wadanku, isla markaana uu waxkasta qaali noqdo gudaha wadanka Gumaysiga Itoobiya.
Isku soo wada duub oo wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa noqday wadanka aduunka ugu nolosha xun marka la eego dhinaca shacabka, waxayna hay’aduhu aad uga dayrinayaa dhinaca nolosha bini’aadamka, iyo maamulka oo aad uliita.